feel. – Studio – MMANIME
Corpse Princess ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့… သူမရဲ့မိသားစုႏွင့္အတူ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံလိုက္ရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ Makina Hoshimura ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးဟာ Shikabane Hime အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ (Hime က မင္းသမီးပါ) Shikabane ေတြဆိုတာကေတာ့ အသက္ရွိေနတဲ့အေလာင္းေကာင္ေတြျဖစ္ၿပီး သုမကေတာ့ Kougon ဂိုဏ္းနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့သူပါ။ ဘာလို့ အလုပ္တူတူတြဲလုပ္တာလဲဆိုေတာ့ သူမရဲ့ေသဆုံးမွုအတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ လၽွို့ဝွက္ဆန္းၾကယ္ ဖုတ္ေကာင္အဖြဲ႕အစည္းကို လက္စားေခ်ဖို့ပါ။ သူမဟာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ဘုန္းႀကီးလဲျဖစ္သလို သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းလဲျဖစ္တဲ့ Keisei Tagami ဆိုတဲ့လူရဲ့ တာဝန္ေတြမွာ ဝင္ေရာက္အကူအညီေပးေနသူပါ။ ဆိုေတာ့ ဒီဇာတ္ကားဟာ Keisei ရဲ့ညီငယ္ျဖစ္သူ Ouri ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးေပၚ အေျချပဳထားပါတယ္။ Ouri ဟာ ေသျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ထူးျခားတဲ့ဆြဲေဆာင္မွုရွိတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ Ouri တေယာက္ သူ႔အစ္ကိုရဲ့လၽွို့ဝွက္ခ်က္ကိုျဖည္းျဖည္းခ်င္းသိလာၿပီး Shikabane ေတြရဲ့ေလာကထဲကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လို့လာခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့… (Review by-Ajisai) MEGA Links Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode ...
My Teen Romantic Comedy SNAFU Name-My teen romantic comedy SNAFU(Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru) Geners-slice of light,comedy,Drama romance school Type-series Aired- Apr 5,2013 to jun 28,2013 Total Eposide-13 ဒီseriesလေးကတော့ wataru watari ရေးထားတဲ့ light novelကို anime seriesအဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။studioကတော့Brain`s Base studioတို့ကဖြစ်ပြီးGeneon Universal Entertianment, TBS,Delfisound Marvelous AQL,Atelier Musaတို့ကထုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ MAlမှာဆိုရင်Ranked #445ပါ ဒီးseriesလေးကတော့romanceကားလေးပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ခန်းခြင်းစီရဲ့ဆွဲဆောင်မူတေကြောင်ကြည့်ပြီးရင်ကြည်ချင်လာပြီး မညီမငွေ့နဲ့ကြည့်ရမဲ့ကားမျိုးပါ။ Review-ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့Sobu High Schoolလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလေးကစတင်ခဲ့ပါတယ် Hachiman Hikigayaလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်သားကငယ်စဥ်းကတည်းကအထီကျန်ပြီးသူငယ်ချင်းများကရှောင်ဖယ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ကြာတော့လူတိုင်နဲ့ရင်နီးဖော်ရွေမူမရှိဘဲတစ်ယောက်ထဲပဲနေလာပါတယ်။တစ်နေမှာHachimanရဲ့အထက်တန်းကျောင်သားဘဝအကြောင်ကိုရေးခိုင်ပါတယ်။သူရေသားထားတဲ့Eassyကိုမြင်းပြီးဆရာမShizuka Hiratsuka ကကြာရင်တစ်သက်လုံးအထီကျန်နေမှကြောင့်လို့Service Clubကိုပို့လိုက်ပါတယ် အဲ့Clubကလုပ်ဆောင်ရတာကတော့အကူအညီလိုနေ၊တဲ့သူတေကိုကူညီးပေးရတာပါ။ အဲ့clubကို Shizuka Hiratsukaဆရာမကြီးကြပ်တဲ့Clubဖြစ်ပြီးHachimanထက်စောဝင်ထားတဲYukinoshitaဆိုတဲ့ကောင်မလေးရှိပါတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးYukinoကလှပပြီအနေအေးဆက်လွန်ရျ်Ice Cold Beautyလို့ခေါ့ခံရပါတယ်။သူရဲ့ရုပ်ရည်။အရည်းအချင်းအလှပများကြောင်းလူများကမနာလိုကြပြီးသူမာနများကြောင်လူအများကပေါင်သင်ဆက်ဆံဖို့မလုပ်ရဲကြပါဘူး။Hachimanနဲ့Yukinoတို့clubစတွေ့ခါစမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လူတေပေါ့ထားတဲ့အထင်အမြင်တေမတူကြပါဘူ။ Service Clubကိုအကူညီးလာတောင်ကြသူများကိုလိုက်လံကူညီးရင်းနဲ့Hachimanနဲ့Yukinoတို့ရဲ့လူတေပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တေပြောင်လဲလာကြဦမှာလား။ Hachimanကရောအထီးကျန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့ကြည့်ရူရမှာပါ။ ဇာတ်ရန်တေကလည်းMCတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီသူတို့ရဲ့ဇာတ်ပို့ပေးမူတေကြောင်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်သွားစေပါတယ်။ Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13
This Art Club HasaProblem! Download links ! Ep 1 : here Ep2: here Ep3: here Ep4: here Ep5: here Ep6: here Ep7: here Ep 8 : here Ep9: here Ep 10 : here Ep 11 : here Ep 12 : here
Tsuki ga Kirei Review (Anime support myanmar ) - "Tsuki Ga Kirei" (As the Moon, So Beautiful) Total Ep - 12 Genres - Romance, School, Drama Review_Credit ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – စာသစ်နှစ်တစ်ခုရဲ့အစကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူ Kotarou Azumi နဲ့ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့က အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Akane Mizuno တို့ဟာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူကျ ကြပါတယ် … မမျှော်လင့်တဲ့ တလွဲတချော်ပြသနာလေးတွေကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးစပ်သွားစေပါတယ် … တစ်ရက်မှာ အရမ်းကိုလှပတဲ့လပြည့်ညတစ်ညမှာ နှစ်ယောက်သားအတူတူထိုင်နေကြရင်း Kotarou က Akane ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ် … ရိုးရှင်းလှတဲ့သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ကြားမှာ ဘယ်သူတွေ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်ကြမလဲ ? သူတို့ရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းဟာ သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါ့မလား? ဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေက သူတို့ကြားမှာ ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလွဲခြင်းတွေ ပေးမှာပါလိမ့်? Drama ချစ်သူတွေအတွက်ကတော့ ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးမယ့် Animeလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... Ep 1 Ep2Ep3Ep4Ep ...